को अल-Marjani को निर्माण नै समय मा जो कजान मा पारित भएको थियो क्याथरीन द्वितीय, अधिकार छ। यो मस्जिद पनि अर्को नाम छ - Yunusovskaya, व्यापारी परिवारको सम्मान मा, यसको सामग्री प्रदान गर्दछ।
तर, आफ्नो वास्तविक नाम मुसलमान मन्दिर चालीस वर्षसम्म उसलाई विश्वासीपूर्वक सेवा गर्ने Shigabutdinov Marjani, शिक्षक कारण थियो। अल-Marjani - मस्जिद, जो एक वास्तुकला ल्यान्डमार्क सकिन्छ। त्यो पनि ठूलो ऐतिहासिक महत्त्व छ। यो 1552 मा क्याप्चर पछि कजान Ivanom Groznym मा erected पहिलो ढुङ्गा भवन छ।
अल-Marjani मस्जिद (कजान) दुई फर्श हुन्छन्। मुख्य प्रवेश भवनहरु को दक्षिण पक्षमा छ। पहिलो तल्ला, आर्थिक आवश्यकता विनियोजन गरिएको छ दोस्रो प्रार्थना हल मा अवस्थित छ। को मस्जिद सबै भवन अलंकृत arches अवरुद्ध छ। को arches को दोस्रो तल्ला मा सोने को पानी चढा बोट रूपांकनों संग, नीलो हरियो र सुनको स्टक्को संग सजाया छ। सबै एक परम्परागत तातार कला शैली मा डिजाइन गरिएको छ।
को कोठा बीच मीनार गर्न प्रमुख एक सीढी छ। एक सर्पिल सीढी को मीनार देखि गोल गर्ने muezzin लागि बालकनी गर्न जान्छ। मीनार नै शायद कुनै पनि सजावट छ। तर तातार कला तत्व संग सजाया उच्च arches को रूप मा विन्डो खुलने। अल-Marjani - वास्तुकला को एक धन मानिन्छ जो एक मस्जिद।
स्मारक को उपस्थिति को इतिहास
कजान - तातार यसको रंगीन संस्कृति र परम्परा संग बढत। र अल-Marjani मस्जिद - स्पष्ट पुष्टि। को महारानी क्याथरीन द्वितीय कजान एक यात्रा पछि, यो तातार सांस्कृतिक सम्पदाको पहिलो स्मारक निर्माण सुरु गर्न 1767 मा निर्णय भएको थियो। निर्माण मा एक विशाल भूमिका, Yunusovs परिवार प्ले तिनीहरूले मात्र होइन निर्माण गर्न पैसा को एक महत्वपूर्ण राशि योगदान, तर पनि यसको पूर्ण समर्थन मा एक मस्जिद छ।
व्यापारी परिवार Gizetullinyh, Galikeevyh, Valishin र Kazakova पनि निर्माण कोष विनियोजन। तर यो Yunusovs सक्रियतासाथ मस्जिद को विकास मा भाग परिवार छ। पछि, भवन पहिले नै बनाइएको थियो जब, इब्राहिम Yunusov यसलाई सुधार गर्न खोजे। उदाहरणका लागि, एक काठ बार सट्टा, उहाँले एक ढुङ्गा बार निर्माण को उत्तर पक्षमा ईटा विस्तारको गरे, जसबाट यो lengthening बनाए। पछि, त्यो mihrab वृद्धि।
Usmanov व्यापारी मीनार पुनर्निर्माण थियो, र व्यापारीहरू खर्च मा र Gizetullina Valishina एक मीनार को एक परिपत्र बालकनी वरिपरि openwork धातु बार निर्माण गरिएको थियो। फलस्वरूप, समकालीनहरूको एक वास्तविक साक्षी सक्छ वास्तु स्मारक अल-Marjani मस्जिद -। RT यस्तो सम्पदा गर्व हुन सक्छ।
इमाम Shigabutdipa Marjani
हाल अल-Marjani (मस्जिद) केवल एक धार्मिक आंकडा थियो जो एक प्रमुख इमाम नाम हो। Shigabutdip Marjani पनि पहिलो-दर शिक्षक र सार्वजनिक व्यक्तित्वको रूपमा प्रसिद्ध छ। उहाँले Tatars पहिलो consecrated इतिहास थियो।
को मस्जिद बनाइएको थियो जब, व्यापारी Yunusov सबै भन्दा राम्रो सेवक र शिक्षकहरू आमन्त्रण गर्न थाले, जसलाई बीचमा थिए र Marjani, त्यो त स्नातक Bukhara, समरकान्द सारियो पछि। अर्डर गरेर Yunusov कजान मा सार्वजनिक आंकडा छुटाउन उहाँलाई मान्छे गए। Marjani सहमत भए। आफ्नो युवा उमेर भए तापनि उहाँले शुक्रवारका मा प्रवचन नेतृत्व र सदस्यहरूसँग कुराकानी गर्न सुम्पियो। त्यसैले तिनले इमाम-khatib भयो। पछि Marjani "इमाम mudarris" को स्थिति प्राप्त र madrasah मा सिकाउन थाल्नुभयो।
आधुनिक इतिहासको योगदान Marjani
शिक्षक को मस्जिद को विकास गर्न भारी योगदान गरेको छ। आफ्नो इच्छा अनुसार, यो एक व्यापारी Yunusov यस्तो समायोजन गर्न विरोध भएको थियो यद्यपि, नयाँ मदरसा बनाइएको थियो। तर Marjani, अन्य संरक्षक को समर्थन enlisted धेरै परीक्षण पछि, उहाँले अझै पनि नयाँ विद्यालय भवन निर्माण गर्न व्यवस्थित। मा यो इमाम छाडेनन्। उहाँले पनि सिक्ने आफ्नो अपरंपरागत दृष्टिकोण लागि प्रसिद्ध भए। धार्मिक बिषय गर्न साथै, मस्जिद खगोल विज्ञान, ज्यामिति र इतिहासको सिकाउनुभयो। Marjani modernity संग मुसलमान धर्म को गहिराई संयोजन गर्न खोजे। उहाँले तथापि, मूल भाषा उपेक्षा विरुद्ध थियो, Tatars अध्ययन रूसी भाषा थिए जिद्दी। सोभियत युग मा मात्र मुसलमान मन्दिर अल-Marjani थियो किन सायद छ। मस्जिद मुसलमान देशका मुख्य रूप धेरै विदेशी delegations भ्रमण सुरु भयो।
मस्जिद पनि जवान मुसलमान उद्यमीहरू मद्दत गर्छ। अचम्मको कुरा, Tatarstan एक जो को अल-Marjani मस्जिद (कजान) छ वास्तु स्मारक मात्र होइन तर पनि सांस्कृतिक सम्पदाको साइटहरू, संतृप्त छ। स्थान ठेगाना: उल। K.Nasyri, डी। 17।
कसरी स्क्रैप सामाग्री बाहिर आफ्नै हातले एक voodoo पुतली बनाउन
प्रेमको परीक्षण: कसरी मरेको सम्झना गर्न
कान्छो धर्म के हो? कान्छो संसारमा धर्म
बिश्कोक पवित्र पुनरुत्थानको गिरजाघर: सृष्टिको इतिहास
"दक्षिणी" क्याफे (Garibaldi - Leninsky Prospekt): विवरण, समीक्षा
र्नतकी Tamara Tumanov: जीवनी, थिएटर र सिनेमा काम
Tetracycline दाँत: कारण, लक्षण र उपचार सुविधा
सुनगाभा र हेरविचार: एक स्वस्थ बोट किन्न र ठीक तिनीहरूलाई हेरचाह
कसरी "Maynkraft" मा लुगा बनाउने? खेल मा फैशन
Cannibalization - यो के हो? को सोभियत संघ मा नीति collectivization: कारण, प्रक्रिया र परिणाम
जो विभिन्न देशहरूमा चुम्बन अर्थ
एक वयस्क स्कूटर कसरी चयन गर्ने?